မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ဦး အတွက် ထိုင်းအစိုးရကို တောင်းဆိုနေကြ ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ဦး အတွက် ထိုင်းအစိုးရကို တောင်းဆိုနေကြ
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Sunday, December 27, 2015 လက်ရှိထိုင်းသတင်း No comments
ကိုဇော်လင်းရဲ့ မိခင် တရားရုံးတွင်တွေ့ရစဉ်။
မြန်မာနိုင်ငံသား ကိုဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ကိုဇော်လင်း တို့ကို ဗြိတိန်နိုင်ငံသားနှစ်ယောက် အသတ်ခံရမှုနဲ့ စွပ်စွဲပြီး ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကော့စမွီခရိုင် တရားရုံးက သေဒဏ် အမိန့်ချလိုက်တာကို ပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော် လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုဖြစ်တဲ့ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖယ်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC ကထိုင်းအစိုးရကို မနေ့က ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့စွဲနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံ စာတစ်စောင်ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီစာထဲမှာ ထိုင်း-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးနဲ့ ဘုံအကျိုးစီးပွားအပေါ် အသ်ိအမှတ်ပြုလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကျဉ်းကျခံရသူတွေရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အပေါ်ရရှိ ခံစားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအရပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီစီရင်ချက်ကို ဥပဒေကြောင်းအရပြန်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ဒီကာလအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားလာလည်ပတ်တာတွေ ရွှေ့ဆိုင်းထားဖို့ ထိုင်းအစိုးရက တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြောင်း ဒီနေ့ထုတ် နေရှင်းသတင်းစာမှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ်နဲ့ နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ ကန်ချနဘူရီခရိုင်က ဆန်ခလဘူရီမြို့မှာ ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေက မြန်မာနိုင်ငံထဲရောက်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ သားတွေပြန်လာကြဖို့ဆော်သြနေသလို၊ အလည်ပတ် ခရီးစဉ်တွေဆိုင်းငံ့ထားဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။
သေဒဏ်အမိန့်ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကိုဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ကိုဇော်လင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုလဲ ကော့စမွေ အကျဉ်းထောင်ကနေ နခွန်စီထမာရတ်အကျဉ်းထောင်ကို လုံခြုံရေး တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ မနေ့မနက်က ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါတယ်။ နှစ်ကြီးချမှတ်ခံရ တဲ့အကျဉ်းသားတွေကို ကော့စမွေထောင်မှာထားခွင့်မရှိတဲ့ အတွက် ထောင်ပြောင်းလိုက်တာလို့သိရပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ ထိုင်းစာနယ်ဇင်းအသင်း TJA ကလဲ ဒီပြစ်ဒဏ်စီရင်မှုမှာ မြန်မာစာနယ်ဇင်း အသင်း MJA နဲ့အတူသဘောထားတူညီတဲ့ အကြောင်း ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီစာထဲမှာ မိမိတို့တာဝန်ဟာ အမှန်တရားနဲ့ တရားမျှတရေးဖေါ်ထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ် လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကော့တောင်းကျွန်းကအခုအမှုလို ဒွိဟဖြစ်ပြီးရှုပ်ထွေးလွန်းတဲ့အမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ တရားမျှတမှုနဲ့အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးဟာ အထူးအရေးကြီး တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ထိုင်းမီဒီယာတွေကဒီအမှုစုံစမ်းဖေါ်ထုတ်ရေးမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်လို့လဲ ရေးသားထားပါတယ်။
ဒီနေ.အဖမ်းခံထားရတဲ့ ဒို.နိုင်ငံ သားများ အချုပ်ခန်း...
♪ မိမိကိုယ်ပေါ်မှာ တက်တူးအမိုက်စားကြီးတွေထည့်နိုင်မ...
♪ Android Device မှာ Custom ROM ကို Flash ပြုလုပ်န...
KINGO ROOT v2.6 Cracked APK [Root Almost Any Andro...
Adobe Flash Player 20.0.0.267 Offline Installer La...
True Smart 3.5 ဖုန်းတွေအတွက် unlock လုပ်ချင်ရင် အေ...
Iris Lava 360 အတွက် unlock ဖိုင်လေးပါ flash toolေ...
♪ Android OS 5.1 အထိ Click တစ်ချက်ထဲနဲ့ Root ပေါက်...
မချောစန္ဒီထွန်းကို ထောင်ဒဏ် ၆ လ ချမှတ်
သေဒဏ်ကျမြန်မာ ၂ ဦး လွတ်မည်ဟု ယုံကြည်နေကြ
♪ “Information များမဆုံးရှုံးဖို့ လုပ်ဆောင်ထားသင့်...
တစ်အိမ်ထောင် ကလေးတစ်ဦးပေါ်လစီ တရုတ်တွင် အဆုံးသတ်
သေဒဏ်ကျ မြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦး လွတ်မြောက်ရေး ပြည်မြိ...
အမှန်တရားက ပြတင်းပေါက်ကခုန်ဆင်း သွားပြီလား
မြန်မာနှစ်ဦး လွတ်မြောက်ရေး ရွှေဝါရောင်သံဃာ့ကွန်ရက်...
မြန်မာလူငယ်နှစ်ဦးအတွက် အယူခံဝင်ပြီး ထိုင်းပြည်သူမ...
ထိုင်းတွင် သေဒဏ်ချမှတ်ခံရသော မြန်မာလူငယ် နှစ်ဦးအတ...
မြန်မာဌာန | သတင်းများ ကျောင်းသားတစ်ဦး ထပ်မံ ဖမ်း...
မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ဦး အတွက် ထိုင်းအစိုးရကို တောင်...
ချင်းရိုင်နယ်စပ်ဂိတ်တွင် မြန်မာ ၂၀၀၀ ခန့် လိပ်ကျွန...
ဘုရားသုံးဆူနယ်စပ် စက်ရုံများ ယာယီပိတ်၊ မြန်မာဘက်သွ...
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ထိုင်းလူမျိုးများ သတိဖြင့် နေထိုင...
မြန်မာလူငယ်နှစ်ဦးအရေး ထိုင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ...
မြန်မာလူငယ်နှစ်ဦးအပေါ် သေဒဏ်ချမှတ်မှု ကော့သောင်းစက်...
ပညာပေးသော ကမ္ဘာကျော် စကားလုံးများ
Windows တိုင်းမှာ မကြာခဏဖြစ်တတ်တဲ့ dll file error,...
Computer မှာရှိနေတဲ့ မလိုအပ်တဲ့ဆော့ဝဲတွေကို အပြီးအ...
WinToUSB Enterprise v2.7 Full Keygen
MYANMAR FONT INSTALLER For HUAWEI G730 & Y511 ရယူပ...
ALL IN ONE ROOT TOOL FOR ZTE
Rufus 2.6 Build 818
Mtk Devices တွေမှာ Imei Invalid ( Or ) Null ဖြစ်နေ...
Silent Camera [High Quality].APK
Christmas နီးလာပြီဆိုတော့လည်း Christmas နဲ့သက်ဆိုင...
DILWALE 2015 480P DVDSCR 720 MB
THE MARTIAN 2015 မြန်မာစာတန်းထိုး
BANGISTAN (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
♪ C-RONALDO ချစ်သူများအတွက် သူ့အကြောင်းဖြစ်ရပ်မှန်...
iPhone, iPad Reset Settings များအကြောင်း
WDS Point to Point Bridge Wireless Configuration E...
Hardware နှင့် Networking အတွက်ဖတ်သင့်သည့်စာအုပ်(၁...
Vivo ဖုန်းတွေကို ဘယ်လို Firmware တင်မလဲ (PDF) စာအု...
Gionee Brand ဖုန်းတွေကို Firmware ရေးနည်း
Windows ပေါ်တွင် boot.img, recovery.img ဖိုင်များကိ...
MTK Phone Firmware Error အားလုံးအတွက် ယခု post လေး...
Windows XP ချစ်ပရိတ်သတ်များအတွက် Windows XP Sp3 Co...
နောက်ဆုံထွက် ရှိလာတဲ့- Windows7Sp1 AIO Update De...
နောက်ဆုံထွက် ရှိလာတဲ့-Windows 8.1 Pro VL Update3...
Windows 10 Pro Final 64 Bit Update Desember 2015 F...
Windows 10 Pro Final 32 Bit Update Desember 2015 F...
CLASH OF CLAN (COC) GAME မှာမြန်မာလို မပေါ်တဲ့သူတွေ...